Nkọwa ihe omimi Esi ewepụ data site na Ngwá Ọrụ Ncha ihuenyo
Nchịkọta weebụ bụ okwu a ma ama na ụwa mmemme. Ọ na-enye anyị ohere ịnakọta data bara uru sitere na isi mmalite dị iche iche ma nyere aka mee ka azụmahịa anyị. Ruo ọtụtụ afọ, scrapers web ejirila iji wepu ozi site na ibe weebụ, akwụkwọ ndekọ ederede, ntanetị weebụ, ọpụpụ njem, ntanetị akụkọ, na ebe nrụọrụ weebụ ịzụ ahịa. Ndacha ihuenyo bụ ngwá ọrụ dị ọhụrụ, ọ dịghịkwa mkpa ịmepụta ihe ọ bụla iji mee ka ọ baara gị uru. Ngwaọrụ a dị mma maka ụlọ ọrụ na freelancers n'ihi na o nwere ike ime ka ọrụ gị dịkwuo mfe - hosting christmas dinner. A na-akpọ atụmatụ ndị dị na ihe nyocha ihuenyo a n'okpuru.
1. Ọnụ ọgụgụ kọmpụta ngwa ngwa
Site na ngwa nyocha ihuenyo, ị nwere ike iji ọnụ ahịa dị iche iche dị iche iche dịka Amazon na eBay nyocha.Ọ na-anakọta, na-ahazi na nyochaa ogo nke data gị mgbe anapụtara ya. Na mgbakwunye, ngwá ọrụ a na-edozi nsogbu niile dị mkpa ma nyere gị aka ịnweta ozi ọnụahịa nke ngwaahịa dị iche iche.
2. Nyochaa ebe mgbasa ozi mgbasa ozi
Onye mmemme na ndị mmepe na-emekarị mkpesa na ihuenyo nkịtị na-eji ihe mkpofu enweghị ike iwepu ozi site na netwọk mmekọrịta. N'adịghị ka ndị nyocha ahụ, Screen Scraping tool extracts data bara uru site na Facebook na Twitter ma dezie ya na usoro.
3. Na - eme nnyocha dị ntanetị mfe
Ngwaọrụ a dị mma maka ndị nchọpụta, ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ n'ihi na ọ na - ewepu data sitere na magazin weebụ na eBooks mfe. Ị nwere ike wepu ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche ma debe ya dị ka nke gị. Ma, ị ga-ahụ maka iwu nwebisiinka na iwu ụghalaahia mgbe ị na-ewepụ data sitere na isi iyi dị n'ịntanetị. N'ozuzu, ngwá ọrụ a na-enyere ụmụ akwụkwọ aka inweta ma hazie ozi sitere na saịtị dị iche iche. Ọ na-enyere ha aka ịkwadebe ọrụ ziri ezi ma wepụ ihe dị ka puku iri na ibe weebụ n'otu awa.
4. Onye na-arụ ọrụ ntanetị dị ike:
Scraping Screens bụ ngwá ọrụ dị elu mgbe ọ na-abanye n'ịtọ ndepụta nke ibe weebụ.Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta ọtụtụ crawlers n'otu oge, ọ dịghịkwa mkpa ka anyị nyochaa ihe na-eme n'azụ. Anyị ga-akọwapụta data na ngwá ọrụ a ga-echekwa ihe ndị ahụ a kpochapụrụ na nchekwa data ya. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iji ya ịwapụta ibe weebụ dị mgbagwoju anya ma mee ka arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma. Ngwunye ihe nyocha ihuenyo dị oke maka webmasters ma nyere ha aka melite ogo ogo ọchụchọ nke saịtị na blọọgụ ha.
Data weghachite na Ngwá Ọrụ Ncha ihuenyo:
Iji dị mfe, ebe a bụ nkọwa nzọụkwụ site na ntinye iji malite scraping web na ngwá ọrụ a dị egwu:
Nzọụkwụ 1: Pịa na ngwa ihuenyo ihuenyo gị na taabụ Mee. Ngwaọrụ a ga-achọpụta onye ọ bụla na ụkpụrụ ya pụrụ iche.
Nzọụkwụ 2: Ọ dị mkpa ịhọrọ usoro nchapu na usoro nke data gị. Ugboro ugboro, ihe nyocha ihuenyo na-enye data na CSV na JSON formats.
Nzọụkwụ 3: Pịa bọtịnụ n'ihu ka ịmalite ịcha. Ngwaọrụ a ga-ebu ụzọ nweta ozi gị, hazie ma kpochapụ ya na usoro a na-achọsi ike. Echefukwala ibudata data scraped na draịvụ ike gị maka iji ọrụ ntanetị.